News Collection: समिक्षा : धर्मा
समिक्षा : धर्मा
चलचित्र : धर्मा
कलाकार : मनिषा कोइराला, राजेश हमाल, निखिल उप्रेती, अनु शाह, शंकर आचार्य
निर्देशक : दीपेन्द्र के. खनाल
निर्माता : दुर्गा पोखरेल (पीएचडी)
कथा/संवाद : उगेश रायमाझी
पटकथा : दीपेन्द्र के. खनाल
संगीत : हरि लम्साल
छायांकार : राजुविक्रम थापा
द्वन्द्व : सूर्य थोकर
नृत्य : रिनशा राई/कृष्ण अछामी
अवधि : २ घण्टा २० मिनेट
बजेट : १ करोड रुपैंया सर्टिफिकेट : पीजी
वितरक : डिजिटल सिनेमा नेपाल
रिलिज : २४ मंसिर (मध्य र पश्चिम)/३० मंसिर (पूर्व)
रेटिङ : ३.५
'धर्म'को अस्तित्व नै संकटमा परे विकल्प के ?' दीपेन्द्र के. खनाल निर्देशित चलचित्र 'धर्मा' भन्छ -न्यायका लागि हिँसा पनि जायज हुन्छ ।' मार्क्स् बाद निकट लाग्ने यो उक्तिलाई चलचित्र 'धर्मा'ले आधुनिक महाभारतको सारसँग वर्णन गरेको छ । दोस्रो प्रोजेक्टका रुपमा दीपेन्द्रले राम्रो कमर्सियल र फर्मुला चलचित्र पस्किएका छन् । सिनेमा हेर्दा यस्तो लाग्छ -निर्देशकले फिल्म मेकिङका कैंयन कडा नियमहरु पनि तोडेका छन् जुन कथित मुलधारका नेपाली सिनेमामा विरलै पाइन्छ ।
मुलत मधेश, तराइ र चुरे पहाडका जंगलबाट भैरहेको काठ तस्करी, बन फँडानी, लोपोन्मुख एकसिङगे गैंडाको खाग, रक्तचन्दन पैठारी, अपराधी तथा तस्करलाई संरक्षण दिने राजनीतिक दलहरु, त्यसको चपेटामा परेका देशभक्त कर्मचारी, कर्मचारीतन्त्र, दल र प्रहरीमा ब्याप्त घुसखोरीको यथार्थलाई चलचित्रले उठान गरेको छ । कथाभित्र लुकेका प्रेम, अवसाद, मनोदशा र मनोरन्जनका आयामलाई निर्देशकले सशक्तरुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । 'साँघुरो' मनोरन्जनमा सीमित नेपाली कमर्सियल चलचित्रको तुलनामा 'धर्मा' माथि उठेको छ । बलिउड बाला मनिषाको जबर्जस्त कमब्याक चलचित्रको महत्वपूर्ण पक्षँ हो ।
कथा : धर्मा (राजेश हमाल) वन अधिकृत हो । गौरी (मनिषा कोइराला) धर्माकी मायालु पत्नी । अभय (संयोग) धर्माको भाइ र दिया (अनु शाह) धर्माकी साली । वनफँडानी र तस्करीलाई रोक्न धर्मा अधिकृतका रुपमा कालिवन सरुवा हुन्छ र तस्करी रोक्ने मिसन थाल्छ । कालीवन यस्तो घनाजंगल जहाँ प्रहरी इन्स्पेक्टर दण्डपाणी (शंकर आचार्य) मुख्य तस्कर (माधव आचार्य)सँग मिलेर लाखौं क्युफिट काठ, अवैध पैठार र जंगल फँडानी गर्नमा सहयोग पुर्‍याइरहेको हुन्छ । दण्डपाणीले यसो गर्नमा तस्करबाट लाखौं घुस पाइरहेको हुन्छ । ऊ घुसविरोधी आफ्नै असइको हत्या गर्छ र दोष चाहिँ धर्मालाई लगाउँछ । झूठो मुद्दामा धर्मालाई फसाएर प्रहरी हिरासतमा थुनिन्छ । निर्मम यातना दिइन्छ । यातना र उपचार नपाएर धर्माको मृत्यु हुन्छ । धर्माको भाइ अभय आफ्ना दाजुको बदला लिन र भ्रष्टाचारीलाई छानी-छानी हत्या गर्न थाल्छ । दाजुको रिहाइका लागि मन्त्रालयदेखि वन कार्यालयसम्म दौडधुप गर्दा घुस लिने कर्मचारीलाई सिध्याउँदै हिँडेको अभय दियालाई निकै माया गर्छ । तर ऊ मायाभन्दा आफ्नो दाजुको संकल्प पुरा गर्न तरबार उठाएर लागिपर्छ । धर्माकी विधवी गौरीको अठोट पनि लोग्नेको हत्यामा संलग्नलाई दण्ड दिनु हुन्छ । कथा अघि बढ्दै जाँदा प्रहरी डिएसपी (निखिल उप्रेती) श्रृङ्खलाबद्ध हत्याका घटनाको अनुसन्धान गर्दै जाँदा कालिवन पुग्छ र धर्मा मारिनुको यथार्थ तथ्य पत्ता लगाउँछ । ऊ पनि प्रहरी ड्रेसको आवरणमा तस्करसँग मिलेको आफ्नै इन्सपेक्टर र तस्करहरुविरुद्ध लाग्छ । अन्त्यमा गुन्डाहरुले कब्जामा लिएकी गौरीले दुर्गाशन शैलीमा मुख्य तस्कर जसले लोग्नेको हत्या गरेको थियो उसलाई तरबारले बदला लिन्छे । अभय, दिया र गौरीलाई लाग्छ धर्माको चाहना पुरा भयो । अन्त्यमा गौरी भन्छे -एउटा धर्माको हत्या गरेर हुँदैन । भोली हजारौं धर्माहरु जन्मन्छन् ।'
निर्देशन : चलचित्र मेकिङको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको पटकथा हो । यति बलियो 'स्क्रिनप्ले' कि चलचित्रले सबै दर्शकलाई 'होल्ड' गर्ने सामथ्र्य राख्छ । जटिल कथा र उपकथालाई सुललित, सहज र सरस शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रत्येक नयाँ पटकथाले दर्शकमा उद्देलना र कौतुहलता पैदा गर्छ । द्धन्द्धको विकास पैदा गर्न निर्देशकले पर्याप्त मिहेनत गरेका छन् । सिङ्गो कथाभित्र मानवीय संवेदना र स्वभावलाई गजबले चित्रण गरिएको छ जसका कारण एकछिन पनि दर्शकको 'सेन्टिमेन्ट' भंग हुने परिस्थिती बन्दैन । 'फाइट' र 'कन्फ्लिक्ट' दुवैलाई निर्देशकले सँगै गति दिएका छन् । सम्पादनको 'प्लेसमेन्ट'ले पनि निर्देशकीय पक्षलाई सघाउ पुर्‍याएको छ ।
अभिनय : बलिउड स्टार मनिषाले 'ट्रेडमार्क' मुस्कानमै कमब्याक गरेकी छिन् । मायालु पत्नी र गृहणीका रुपमा मनिषाको अभिनय 'लाउड' छ । 'मल्टिडायमेन्सन' चरित्रका रुपमा महानायक हमालको अभिनय फिट छ । एक्सनमा निखिल उप्रेती जमेका छन् । नयाँ हिरोका रुपमा संयोगको अभिनय पनि नयाँ नै छ । उत्तराद्र्धको लिडिङ क्यारेक्टरका रुपमा संयोगले मिहेनत गरेका छन् तर अझै गर्नुपथ्र्यो । अनु शाह छोटो भूमिकामा राम्री छिन् । शंकर र माधव आचार्य खलपात्रका रुपमा राम्रा छन् । रेजिना उप्रेतीको आइटम डान्सले 'दबङको मुन्नी बदनाम'को झल्को दिन्छ । सिनेम्याट्रोग्राफी, कस्ट्युम डिजाइन, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक, लाइटिङ, मेकअप पात्र र कथानुकूल छन् ।
संगीत : 'यो मनको खाली पानामा', 'मान्दैन..मान्दैन'लगायतका गीतहरु रिलिज अगावै चर्चित भैसकेका थिए । हरि लम्सालले चलचित्रको संगीतमा दम भरेका छन् । सबै गीतहरु कर्णप्रिय र जुरुकजुरुक पार्ने खालका छन् । रेजिना उप्रेतीको आइटम डान्स 'बबाल' छ । पटकथानुसार गीतहरुको 'प्लेसमेन्ट' उपयुक्त छ । गीतका शब्दमा दुर्गा पोखरेल र संजीव थापाले मीठास भरेका छन् । रिनशा र कृष्णको कोरियोग्राफीले डान्सको अपेक्षालाई पुरा गरेको छ । 'राइ इज किङ'को स्वरले लठ्ठ तुल्याउँछ ।
किन हेर्नुपर्छ ?: लामो समयपछि मनिषाको कमब्याक । नेपाली राजनीति र परिवेश सान्दर्भिक सशक्त कथा । दीपेन्द्रको नयाँ निर्देशकीय प्रयोग । रेजिनाको आइटम डान्स दर्शनिय छन् । खासगरी मल्टिस्टारकास्टको अभिनय चलचित्र हेर्नैपर्ने पक्ष हो । अन्य राम्रा पक्षहरु हेर्नका लागि थिएटरसम्म पुग्नैपर्छ ।